Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay dhigiisa Uganda (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweynaha Soomaaliya oo la kulmay dhigiisa Uganda (Sawirro)
MAREEG 9 November 2015
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta la kulmay Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni, iyadoo kulankan uu qaatay saacado, waxaana labada Madaxweyne ay ku falan-qeeyeen arrimo dhowr ah.
Labada Madaxweyne ayaa si gaar ah uga hadlay xiriirka labada dal, arrimaha ammaanka, iyo sidii loo xoojin lahaa taageerada milatari ay Uganda siiso dowladda soomaaliya.
Kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay arimaha la dagaallanka Argagixisada, gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, iyadoo Uganda ay tahay dalka ugu badan ee Ciidamada ka jooga Soomaaliya ee qeybta ka ah howl galka Midowga Afrika ee AMISOM.
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa dhinaciisa balan qaaday in dowladdiisa ay xoojineyso taageerada iyo xiriirka saaxibtinimo ee ka dhaxeeya Soomaaliya.
Sidoo kale Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ammaanay doorka Ciidamada Uganda ka qaateen howl galka AMISOM.
Dowladda Soomaaliya oo amar ku bixisay in la xiro illaa 35-Website